Izinhlanzi zikaRoteña, isidlo esijwayelekile sase-Andalusi esivela kumasipala waseRota (Cádiz) | Ukupheka Kwekhishi
Namuhla bengifuna ukukunikeza isidlo esijwayelekile kakhulu esivela kumasipala wase-Andalusia waseRota, esifundazweni saseCádiz. Imayelana ne-scrumptious yakho izinhlanzi ze-roteña, a inhlanzi Okwesabekayo okuhambisana nemifino eminingi ukunikeza le recipe impilo.
Manje kufanele uzinakekele kahle, udle uphilile futhi uphilile ukugcina i-tipito, ngoba izinsuku zebhishi nezindawo zasolwandle zizofika maduze, lapho silala khona elangeni ukwenza i-toast ngenkathi siphumule.
Abanye bamhlophe okhalweni.
1/2 upelepele obomvu.
1/2 upelepele oluhlaza.
Ama-clove ayi-3 kagalikhi
Utamatisi obomvu o-3.
Upelepele omnyama ophansi
Le recipe yezinhlanzi zeRoteña kulula kakhulu ukuyenza noma ngabe inezithako eziningi. Okokuqala sizosika wonke amafayela we- imifino kaJulienned futhi, ngokuqondene negalikhi, sizoyisika kahle kakhulu.
Okulandelayo, sizofaka ifayela le- skillet isifutho esihle samafutha omnqumo. Uma kushisa, sizofaka ugalikhi. Uma sezinsundu ngokusagolide sizofaka u-anyanisi, kuthi kamuva, sifake izinhlobo ezimbili zikapelepele. Lapho sibona ukuthi yonke into icwilisiwe kancane, sizofaka utamatisi bese siyiyeka ipheke kuze kube yilapho yonke into isizingelwe kahle. Kungcono ukumboza ipani ukuze liphume ngokushesha.
Ngemuva kwalokho, sizofaka uhhafu wengilazi ye iwayini White futhi, lapho utshwala sebuhwamukile (ubilise), sizofaka izigaxa zezinhlanzi nezinongo, usawoti, i-thyme nopelepele omnyama ogayiwe.
Ekugcineni, sizovumela izinhlanzi zipheke kule sauce yewayini nemifino ezimbalwa Imizuzu ye-5 futhi usulungele ukudla!. Ngiyethemba uyasithanda lesi sidlo esijwayelekile seRoteño.
Imininingwane engaphezulu - Hake papillots nge izaqathe kanye neek
Isikhathi esiphelele Imizuzu ye-25
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 213
Ukupheka Kwenhlanzi, Ukupheka okunempilo
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ukupheka Kwenhlanzi » Iresiphi yezinhlanzi iRoteña, isidlo esijwayelekile seRota (Cádiz)
Ngizothenga inhlanzi futhi ngilandela iresiphi yakho. Impela kuzophuma kube kuhle kimi. Ngiyabonga !!!!!!
I-Lasagna enenyama nepate, elula futhi emnandi
Amaqanda ane-bechamel, isidlo sakusihlwa esihle sezingane